iLove Lyrics — ခရီးစဉ်လီ
သူတို့သည်ငါ့အယ်လ်ဘမ်သစ် "ဒီကောင်းမွန်သောဘဝပေါ်မှာငါ့သီချင်း iLove မှသီချင်းစာသားဖြစ်ကြသည်။” အခြားသူမည်သူမဆို iLove မှခံစား?
သူမသည်အများအပြား befriends, ကျွန်တော်သူမ၏မျက်စိ၌ပျောက်ဆုံးသွားရ
သူမသည် addicting င်, အမွန္တရား: ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် fiends
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကော် sniffing သည်မဟုတ်, ကျနော်တို့ရုံဖန်သားပြင်မှလျှက်ရှိကြောင်းင်
ကျနော်တို့နိုင်ရန်အတွက်သူမ၏စောင့်ရှောက်ရန်နေ့စဉ် em နှင့်အတူသူမ၏ sync
ငါတကယ်သူမ၏လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုအမေး? ငါကဲ့သို့ဖြစ်, "မျိုး”
ငါဆက်စပ်ပစ္စည်းများတွင်သူမ၏စောင့်ရှောက်, ကောင်လေးတစ်ယောက် ya သူမ၏စာကိုလုယူပြုပါ
တစ်ဦး-Dime ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းမေ့လျော့, သူမလေးပုံတစ်ပုံနဲ့တူပိုပြီးင်
သူမသည်တစ်ဦး Lil မနာလိုသောသူသည်င်ငါဘာတစ်ခုမှသူမ၏ဆုံးရှုံးကြပါဘူး
ဒီ iLove ဖြစ်ပါသည်
ယခုတွင်ငါသည်မစဉ်းစားနိုင်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ lipo
ရပ်ရွာရဲ့ကိုယ်ရောစိတ်ပါတစ် backseat ယူ
ငါသည်အခြားသောသူတို့အားပြောပြရန်ကြိုးစားကြည့်ပါ, ငါမူကားအားနည်းအရူး feeling တာပါ
သူမငါ့ကိုဆငျခွငျကွပါစို့ gon မလျှင်သူမကိုပြောသည်
0 0	ဝေစု
andy_awad • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤသီချင်းဖုန်းများ / စမတ်ဖုန်းအကြောင်းနှင့်သူတို့လက်တွေ့ဘဝထဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုပယ်ရှားတော်မူပုံကို, ကျွန်တော်တို့ကိုအာရုံပျက်ငါတို့ပြဿနာများ. ဖုန်းများနှင့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့လူတစ်ဦးအတွက်လူမှုရေးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုကျော်ဦးစားပေးဖြစ်လာကြပါပြီ, ပင်ဝိညာဉ်ရေးမှာကြီးမားတဲ့အာရုံနိုင်ပါတယ်. (တစ်ဦးရှင်းပြချက်လိုသူမည်သူမဆိုများအတွက်, သီချင်းလျှင်ငါ့နားလည်မှုခဲ့သည်)
@ProphetLink • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဟားဟား, ချီးမွမ်းခြင်းကိုဘုရားသခငျသညျ…သငျသညျအကြှနျုပျ၏ tweet တယ်လျှင်သေချာမသိ, @ProphetLink, ငါမူကားသင်ဤ posted ရှေ့၌ငါလက်ျာဘက်ကတယ်ယုံကြည်သညျဘုရားသခငျကိုခြီးမှမျး…အရမ်းသူမ၏ iLove…ရန်အလေးအနက်ထားမြန်ဆန်စွာရှိခဲ့နှင့်သူမ၏ငါရှိခဲ့ကျွန်ခံကိုချိုးဖျက်ဖို့ဆုတောင်းပဌနာ…သူမကအစောပိုင်းအပေါ်မှာငါ့အိမ်ထောင်ကိုနာကျင်ခဲ့သည်…စိတ်နောက်သော…တစ်ဦးမီးလောင်အယ်လ်ဘမ်ပေါ်မှာမီးလမ်းကြောင်း. သခင်ဘုရားသည်သင်အသုံးပြုဆက်လက်နိုင်ပါစေနှင့်သင်သူ့ကိုသင်ကမှတဆင့်လုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုစေခြင်းငှါဒါသူနီးကပ်သငျသညျစောငျ့ရှောကျစခွေငျးငှါ. ဘုရားသခင်သည်သင်၏နာခံမှုကောင်းကြီးပေးတော်မူ.
ဧည့်သည် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:50 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အိုဟုတ်တယ်, အဲဒါကျွန်တော်ပါပဲ! ကောင်းသောအမှု
Kayla မွန်ရိုး • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:50 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင် gopel ဝေမျှဖို့ဆက်လက်ပိုပြီးမကြာခဏ Tumblr သည်ပေါ်တယ်နှငျ့သငျလှနျးဒီသီခငျြးကိုတစ်ခုရှင်းပြချက်ပေးနိုင်လျှင်အကြီးအပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ငါအလုပ်များသောသင့်သိလျှင်အကြီးအဖြစ်ပါ့. ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ.
Themba • သြဂုတ်လ 29, 2013 တွင် 7:32 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်သည်လူဈတကယ်ဘာတစ်ခုမှဘုရားသခငျသညျသငျသညျကြီးတွေအချိန် bro အသုံးပြုနေသည်ဆိုသညျကား!!! ကောင်းစွာသူနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်အရာခရီးစဉ်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဈကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါသီချင်းအကြောင်းကို “ငါချစ်တယ်” ပထမဦးဆုံးလိုင်း “အကြှနျုပျ၏ရည်းစားရဲ့နာမည်တစ်ခုငါနှင့်အတူစတင်သည်” ယခုမူကားဈ iPhone ကိုနားလည်. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျလူကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ. တောင်အာဖရိကဆီကနေ Themba.
TIAWANAMCSHAN • ဇွန်လ 26, 2014 တွင် 2:47 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အာမင်ဟုတ်သည် HE ခရီးစဉ် IS AN အံ့သြစရာ Rapper IS သင်တို့သည်ကောင်းသောဘဝကိုစာအုပ်လေးကိုရှိပါကမဟုတ်ပါထိုအခါသင်သည်တကယ့် MY မျက်လုံးများကိုဖွင့်ပြီးကျကောငျးမှဘဝကိုပြောင်းလဲအိုင်တီဆိုတာဘာလဲသင်ပြလွန်းခံစားရဘယ်လောက်ကောင်း DID BEACUSE အိုင်တီ GET သွားသင့် ယေရှုခရစ်၌ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကို
TIAWANAMCSHAN • ဇွန်လ 26, 2014 တွင် 2:42 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
HI ခရီးစဉ်လီ ,
MY NAME ကဟူစတန် TX AND ထားတဲ့ IM သင့် FROM မှ TIAWANA MCSHAN IS #1 FAN ငါသိပ်ကောငျးဘဝကိုစာအုပ်လေးကိုမေတ္တာနှင့်ငါသီချင်းဆိုခြင်းရှိသမျှကို'S ထားတဲ့ IM LOVE 29 အသက်ငါဖွစျသညျအခြိနျ မှစ. သခင်ဘုရားအဘို့မီးပေါ်မှာခဲ့တာ 12 နှစ်အရွယ် ………..??? သင်တို့ရှိသမျှနည်းလမ်းတွေခြင်းသည်အံ့သြစရာလကျဆောငျခဲ့ကြသင်ငယ်စဉ်ကာလခရီးစဉ်လီ …………. ငါကဘာလဲဆိုတာတချို့ရဲ့နေ့ True Love FIND သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံငါအိုင်တီလည်ကဲ့သို့ WORGN နည်းလမ်း BEECAUSE တခါတလေလည်းငါလည်း PHOTOS မှတဆင့်ဒါပေမဲ့ငါအရမ်းဝမ်းနည်းပါတယ်ပါပြီးနောက်လည်းလူငါ့ကိုယ်သိအောင်ပြပါဖူးချစ်ခြင်းကိုခံရသင့်၏ခံစားရခံစားရ …. ငါဘုရားသခင်၌ AM WHO ကသိသောကြောင့်ငါဆိုးခံစားပြီးနောက် SO သူတို့ကိုငါလည်းသူနဲ့ RIGHT ပေးပို့ခြင်းငါမျက်နှာချင်းဆိုင်ငါတစ်ဦးကသူငယ်ချင်းတယောက်ကတဆင့်သူနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပြောဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဘယ်တော့မှအစည်းအဝေးဒီနည်းကို GUY ခဲ့ကြောင်းနှင့်သူသည်ငါ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဓာတ်ပုံရိုက်မေးပါ ငါနှင့်လည်း BE သော်လည်းငါ့ MOM ကြင်နာမှုမိန်းမမဟုတ်ဘူး KNOW …….. ထို့နောက်သူတချို့ရဲ့အခြားအမျိုးသမီး PHOTOS ဒီနည်းကို GUY ကျွန်မခင်ပွန်းမဟုတ်ပါဖြစ်ပြီးတစ်ခါတလေငါပါပဲလုပ်ဆောင်မီငါတှေးလို SO မကောင်းတဲ့ခံစားချက်ဒါကြောင့် ME LOW ခံစားရလည်းစမ်းကြည့်ပါလည်းပြ …………. ငါအဘို့ဆုတောင်းကြလော့မယ်လို့မေးခရီးစဉ် … လည်းကျင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တန်ခိုးတော်၌ ME သို့တက်ကြလိုစေ ……… FORGIVE SO Sorry သခင်ယေရှုကိုထားတဲ့ IM…. ခရီးစဉ်လီတဲ့ IM သင့် # လုံး FAN …. သင်တို့ကိုငါမုဒိမ်းကျင့် Miss ဒါပေမဲ့ငါဘုရားသခင်ကိုအခြားသတင်းများအရာတို့ကိုသိ, သငျ့အတှကျပုံပြင်ထဲမှာ ….. ငါသင်၏အသက်ကိုကြည့်ရှုကျွန်မကျမ်းစာနှင့်သင့်စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြတဲ့အခါကျွန်မငါသည်ကောင်းသောဘဝကိုလိုပြောဆို ……. SO ထားတဲ့ IM လည်းငါ၏ကိုယ် FOR သော်လည်းငါ့နှလုံးနဲ့ ME ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် WHO ကလူငါ့ကိုချစ် ME FOR ငါ့ကို ချစ်. မဟုတ်ပါမည်သူတစ်ဦးကောင်း CHRISTAN MAN ကောင်းသောအရာ IS ငါ့ကိုလွှတ်ဘုရားသခငျသညျများအတိုင်းဆက်လုပ်ကိုင်သူ့ကိုစောင့်ဆိုင်းသွား………. WE MARRIDE GET သောအခါအကောင်းသောအရာ MY လက်ထပ်တဲ့နေ့ကငါသီချင်းဆို BE မညျ !!!! ချစ်သူများသင့် # 1 FAN TIAWANA
Name ကို (*)
ဤသည်ဧဝံဂေလိတရားနှင့်လူမျိုးရေးပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအပေါ် ERLC ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှခရီးစဉ်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ဖြစ်ပါသည်. အောက်တွင်ကြောင်းသတင်းစကားကိုမှလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်. ဒီညနေ, ငါအနှစ်တစ်ထောင်နှင့်လူမျိုးရေးပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ဟုမေးခဲ့ကြရတယ်. ထိုအခါငါကဒီမှာရပ်နေနှင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်၌စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုဦးတည်သည်ဤအံ့သြဖွယ်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အစေခံရန်အခွင့်ထူးခံစားရ. တစ်ဦးအဖြစ်
ခရီးစဉ်ရဲ့အသစ်စာအုပ်ထဲတွင်, တက်, သူသည်ဤမျိုးဆက်မှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ရေးသားဖို့ကြိုးစားခဲ့. သူကအခန်း၏အချို့သောတဆင့်သွားလာနှင့်အကြောင်းအရာများမှာလြှို့ဝှကျထှကျသှားအထွတ်အထိပ်ပေးသကဲ့သို့ Watch.
ငါတိုင်းလူငယ်တစ်ဦးဖတ်ရန်လိုအပ်သည်ထင်သော "ခရီးစဉ်ရဲ့ရေးထားလျက်ရှိ၏စာအုပ်. ယရှေုသညျနှငျ့ဤမျိုးဆက်သည်မိမိစိတ်အားထက်သန်မှုတိုင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကျယ်သောအသံနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတဆင့်လာ. ငါသည်ဤသတင်းစကားကိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ရဲ့မျိုးဆက်တစ်ဆက်အပေါ်ရှိပါတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့မြင်မစောင့်နိုင်။ "- Lecrae, ဂရမ်မီဆုပေးပွဲ- အနုပညာရှင် @lecrae "ထအနိုင်ရတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်
ခရီးစဉ်ရဲ့အသစ်စာအုပ်, တက်, ယခုထွက်သည်! အောက်ကစာအုပ်ယောဟန် Piper ရဲ့စကားချီး Read. သင့်အနေဖြင့်စာအုပ် pre-order နှင့်ခရီးစဉ် Lee ကနှင့်သူ၏စာအုပ်အကြောင်းကျွန်မသဘောကျတယ်အဓိကအရာ Risebook.tv တစ်ခုမှာမှာပိုပြီးထွက်ရှာတှေ့နိုငျ, တက်, ရိုနှင့်ဆီလျော်မှု၏ဆက်စပ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်. အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု၌ဆက်စပ်မှုမှာရည်ရွယ်ချက်မှာဘုံဖြစ်ပါသည်.
ခရီးစဉ် Lee က Facebook က
ခရီးစဉ် Lee က
ခရီးစဉ် Lee က Twitter ကို